Showing १११-१२० of ६५४ items.
कस्तो रह्यो ‘शत्रु गते’ को अुकपेंन्सी ओपनिङ ?
आजबाट सोलो रिलिजमा आएको बहुचर्चित चलचित्र ‘शत्रु गते’ ले सकरात्मक प्रतिक्रियाकाबीच दर्शकहरुको माया पाईरहेको छ । मल्टिप्लेक्स र सिंगल स्क्रिन दुबैमा ‘शत्रु गते’ ले दर्शकको राम्रो साथ पाएको छ । मल्टिस्टारर चलचित्र , दुई वटा चर्चित गीत र साथमा महद्वारा निर्मित चलचित्र भएको कारणले पनि टिकट बुकिङमा नै निकै आक्रमक बनेको ‘शत्रु गते’ ले फस्ट डेमा बिहानी शो मा ६० प्रतिशत अकुपेन्सी , दिवा शो मा ९० र रात्री शो मा ६० प्रतिशतको आसपास रहेको छ । दर्शकको प्रतिक्रिया बुझ्न हलसम्म पुगेका निर्माण युनिटमा शत्रु गतेप्रति दर्शकले देखाएको मायामा खुसी देखिएका छन् । उता उपत्यका भित्रको बितरक गोपाल कायस्थका अनुसार गोप
कृ-२ का लागी तयारी रहेकाे अनमाेलकाे भनार्इ
माघ २६ गतेबाट रिलिज भएको चलचित्र ‘कृ’ले नेपालमा सोचेजस्तो व्यापार नगरे पनि निर्मातालाई भने सुरक्षित राख्यो । निर्माता सुवास गिरीले यो चलचित्रले लगानी उठाएको बताएका थिए । नायक अनमोल केसी पनि यो चलचित्रबाट सन्तुष्ट छन् । जसले गर्दा, सुवास र अनमोल दुवै चलचित्रको सिक्वेल गर्न उत्साहित देखिएका छन् । अनमोल अहिले होम प्रोडक्सनको चलचित्र ‘क्याप्टेन’मा व्यस्त छन् । यो चलचित्र भदौ ८ गते रिलिज गर्ने टार्गेटसहित यसको निर्माणपक्ष छायांकनको तयारीमा छ । भूवन केसीले निर्माण गर्ने चलचित्रलाई दिवाकर भट्टराइले निर्देशन गर्दैछन् । अनमोल चलचित्र ‘क्याप्टेन’को तयारीमा रहँदै गर्दा उनले चलचित्र ‘कृ २’मा काम गर्ने च
प्रदिप र पुजाबीच जम्का भेट हुँदा के भयो ?
प्रेम गीतले नै एकाएक चर्चामा ल्याएका कलाकारहरु हुन् प्रदिप खड्का र नायिका पुजा शर्मा । सुटिङको समय निकै नजिक बनेका यी दुईबीच प्रेम गीतको रिलिज लगत्तै निकै ठुलो फाटो आयो । ‘प्रेम गीत’ को सफलताको श्रेय प्रदिपलाई मात्र दिँदा र सुर्दशन थापा , सन्तोष सेन या भनौ टिमबीच नै फाटो ल्याएको भन्दै पुजाले प्रदिपलाई फेसबुकबाट ब्लक नै गरिन् । त्यसपछि सुरु भएको उनीहरुको वाक युद्ध बेला बेलामा मिडियामा प्रशस्तै देखियो । भनिन्छ पुजाले म यस्तो गीत गाउँछु चलचित्र प्रदिप र सन्तोषको सेख मार्नको लागि नै बनाएकी थिईन् । चलचित्र हिट पनि भयो उता प्रदिप पनि के कम आफनो बलबुतामा नै ‘प्रेम गीत २’ हिट बनाए । सम्बन्धमा नै फाटो
नायिका बर्षा राउतले आफनो तौल घटाउँने प्रयास त्यती सफल भएको देखिएन यसबीचमा अर्की नायिका बर्षा सिवाकोटी पनि आफनो तौल घटाउँन कम्मर कसेर लाग्न थालेकीछिन् । आफनो करियरमा खासै सफल चलचित्र नदिएकी बर्षालाई यतिबेला नयाँ चलचित्रको अफरहरुको कुनै कमी देखिएको छैन् । हालै मात्र जय शम्भुमा अनुबन्धित भएकी बर्षा यतिबेला जिममा आफनो पसिना बगाईरहेकीछिन् । हालसम्म ५ किलो तौल घटाईसकेकी बर्षा अझै ५ किलो घटाउँने प्रयासमा छिन् । सुन्नमा आए अनुसार उनी बिकिनी बडी सेपको लागि कडा मेहनत गरिरहेकीछिन् । कुनै समय प्रेम सम्बन्धबाहेक खासै कुनै बिवादमा नआएकी बर्षाले तौल नियन्त्रण भएपनि बिकिनी नै भने नलगाउँने बताउँछिन् । म्युजि
‘लिलिबिली’ को पोस्टरमा प्रदिप र जसिताको रोमाण्टिक मुड
चर्चित नायक प्रदिप खड्का , जसिता गुरुङ र मल्टिस्टारर चलचित्र ‘लिलिबिली’ को नयाँ पोस्टरहरु आउट गरिएका छन् । मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको चलचित्रको सार्वजनिक पोस्टरमा प्रदिप र जसिता मुख्यरुपमा देखिएका छन् । त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा निर्माण भएको चलचित्रको पोस्टरमा प्रदिप र जसिता रामोण्टिक मुडमा देखिएका छन् । प्रियंका कार्की, अनुपबिक्रम शाही , सविन श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ, ध्रुव दत्त, रितेस चाम्स लगायतका कलाकारहरु पनि अभिनय यो चलचित्र पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको चलचित्र हो । स्कटल्याण्ड, नेपाल, लन्डन र टर्कीको इस्तानबुलमासमेत पहिलो पटक छायांकन भएको ‘लिलिबिली’ ले टे«लर र गीतहरुले चर्चाको राम्रै स्थ
अन्तरास्ट्रिय फ्रेन्चाईज टेलिभिजन रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल’ पहिलो सिजनको सफलतापछि यसको दोश्रो सिजन पनि हुने भएको छ । केही समय अघि दोश्रो सिजन घोषणा गरेको एपिवान टेलिभिजनले भर्खरै अडिसन मिति र स्थान पनि सार्बजनिक गरेको छ । देशका कुना कन्दरामा बसेरा आफ्नो गायन कलालाई तिखार्दै बसेकाहरुको लागि यो निकै ठूलो अवसर र स्थान बनेर आएको छ । पहिलो सिजनमा देशभरको ७ मुख्य सहरबाट उत्कृष्ट जादुमय स्वर भएकाहरूले मौका पाएका थिए भने दोश्रो सिजनमा देशभरका ६ शहरबाट जादुमय स्वरहरु छानिने छन् । नेपाल आईडलको पहिलो सिजनले सुरुवात देखि, सुखद समापनसमेत गर्न पाएको थिएन । अब दोस्रो सिजनले कस्तो उपलब्धि हासिल ग
निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री रेखा थापा सम्भवतः घरेलू फिल्ममा सर्वाधिक गसिप लेखिने जोडी हुन् । बिहे, डिभोर्स अनि मित्रता यी पूर्वपति र पत्नीको समिकरण हो । यो कपल अहिले पनि गसिपबाट टाढा छैन । तर, पछिल्लो समय भने छवि र रेखाको मन पग्लिएजस्तै देखिन्छ । रेखाको जन्मदिनमा छवि उपस्थित हुनु र छविको जन्मदिनमा रेखाले शुभकामना दिनु जस्ता क्रियाकलापले पनि यी दुईले पुरानो दुश्मनी भुल्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसैबीच, फागुन २५ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको छवि ओझा निर्मित फिल्म ‘मंगलम’ लाई अभिनेत्री थापाले शुभकामना दिएकी छिन् । सोमवार फेसबुकमा फिल्मको ट्रेलर शेयर गर्दै उनले लेखेकी छ
भारतीय अभिनेत्री तथा पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीले आफ्ना फ्यानहरुलाई ठूलो सरप्राइज दिएकी छिन् । उनी तीन बच्चाकी आमा बनेकी छिन् । सन्नी र उनका पति डेनियलले यो कुराको जानकारी आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट गराएका हुन् । इन्स्टाग्राममा सन्नीले राखेको तस्वीरमा उनीहरुका साथ तीन बच्चा देखिन्छन्, जसमध्ये एक छोरी र दुई छोरा हुन् । अश्वेत वर्णकी छोरी अली ठूली छन् । उनलाई अघिल्लो वर्ष मात्रै सन्नी दम्पत्तीले धर्मपुत्री बनाएका थिए । उनको नाम निशा सिंह कौर राखिएको छ । साथै, अब उनीहरुसँग अब दुई छोराहरु अशर सिंह बेबर र नोआ सिंह बेबर पनि थपिएका हुन् । तस्वीर सेयर गर्दै सन्नीले क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘भ
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सुन्दर नायिका अशिष्मा नकर्मी बैबाहिक जीवनमा बाँधिने भएकी छिन् । अशिष्माले फागूण २८ गते बिबाह गर्न लागेकी हुन् । अशिष्माले नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका व्यवसायी नविन चन्द्र प्रधानसँग बिहे गर्न लागेकी हुन् । अशिष्माले मागी बिहे गर्न लागेकी हुन् । उनी रंगिन दुनियाँमा प्रेमको चर्चाबाट टाढै रहिन् । बिहेको बिषयमा छोटो प्रतिक्रिया दिदै अशिष्माले भनिन्–‘हो, बिहे अर्पझट नै हुन लागेको छ । पारिवारिक कुराकानीपछि बिहे हुन लागेको हो ।’चलचित्र क्षेत्रमा चर्चामा रहेकी नायिका नायिका अशिष्माले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र ‘अन्तराल’ हो । यसपछि, उनले ‘तोरी लाहुरे, राधे, मेला’ जस्ता चलचित्रमा
इन्सपेक्टर चन्द्रमुखीको नामले लोकप्रिय अभिनेत्री कविता कौशिकले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना केही तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन्। श्रीमान् रोनित विश्वाससँग बिदा मनाउने क्रममा कविताले बिकिनीमा खिचिएका तस्बिर तथा एउटा छोटो भिडियो इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेकी छिन्। उनले ती तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गर्दा चाँही एउटा मन छुने सन्देश पनि लेखेकी छिन्। कविताले ती युवतीहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेकी छिन् जो मोडल तथा अभिनेत्रीलाई निकै सुन्दर मान्छन् र आफ्नो फिगर, बर्थ मार्क, वजन तथा शरीरका दागका कारण सधैं चिन्तित हुन्छन्। कविताले लेखेकी छिन्–‘युवतीहरू बिकिनी त लगाउन चाहन्छन् तर आफ्नो शरीरका कारण अप्ठ्यारो मान्छन्। वजन,